Ngaba Uyise, UNyana, NoMoya Oyingcwele Bayinxalenye KaThixo Oneziqu Ezithathu? | Okufundiswa YiBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseCosta Rica Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseMzantsi Afrika Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAteso IsiAymara IsiBambara IsiBaoule IsiBasque IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChin (sesiHakha) IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuukese IsiChuvash IsiCibemba IsiCreole SaseBissau Guinea IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiGuna IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKabyle IsiKalenjin IsiKannada IsiKazakh IsiKekchi IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKongo IsiKonkani (saseRoman) IsiKorea IsiKrio IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLaotia IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLugbara IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMapudungun IsiMarathi IsiMarshallese IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMende IsiMingrelian IsiMiskito IsiMixe IsiMixtec (saseGuerrero) IsiMizo IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdau IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNiuea IsiNorway IsiNuer IsiNyaneka IsiNyungwe IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPalau IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuiche IsiQuichua (SaseChimborazo) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiRotuman IsiRunyankore IsiRutoro IsiSamoa IsiSango IsiSaramaccan IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTandroy IsiTankarana IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTurkmen (SesiCyrillic) IsiTuvaluan IsiTuvinian IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUighur (sesiArabhu) IsiUighur (sesiCyrillic) IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUruund IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiValencian IsiVenda IsiVezo IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiWolaita IsiWolof IsiXhosa IsiYapese IsiYoruba IsiZande IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo isiLow German isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Inyaniso NgoYise, UNyana, NoMoya Oyingcwele
ABANTU abakholelwa kwimfundiso kaBathathu Emnye bathi uThixo ungabantu abathathu—uYise, uNyana, noMoya Oyingcwele. Kuthiwa aba bantu bathathu bayalingana, bangoosomandla, yaye abanasiqalo. Ngoko imfundiso kaBathathu Emnye ithi uYise nguThixo, uNyana nguThixo, noMoya Oyingcwele nguThixo, kodwa bonke banguThixo omnye.
Abantu abaninzi abakholelwa kuBathathu Emnye bayavuma ukuba abakwazi kuyicacisa le mfundiso. Sekunjalo, bavakalelwa kukuba iyimfundiso yeBhayibhile. Kubalulekile ukuphawula ukuba igama elithi “uBathathu Emnye” alikho eBhayibhileni. Kodwa ngaba iyathetha ngemfundiso kaBathathu Emnye? Ukuze siphendule lo mbuzo, makhe sihlolisise isibhalo abadla ngokusicaphula abo baxhasa imfundiso kaBathathu Emnye.
UYohane 1:1 uthi: “Ekuqaleni, kungekadalwa, wayeselekho uLizwi. ULizwi lo wayekunye noThixo, naye ngokwakhe enguThixo.” (IBhayibhile yesiXhosa yowe-1996) Kamva kwakwesi sahluko, umpostile uYohane ubonisa ngokucacileyo ukuba “uLizwi” nguYesu. (Yohane 1:14) Ngoko, ekubeni uLizwi ebizwa ngokuba nguThixo, abanye baye bagqiba kwelokuba, ‘uNyana kunye noYise bamele ukuba banguThixo omnye.’
Khumbula ukuba le nxalenye yeBhayibhile yayibhalwe ngesiGrike ntlandlolo. Kamva, abaguquleli bawuguqulela kwezinye iilwimi loo mbhalo wesiGrike. Noko ke, abaguquleli beBhayibhile abaliqela abazange basiguqulele esi sibhalo ngokuthi “naye ngokwakhe [uLizwi] enguThixo.” Ngoba? Ngokusekelwe kulwazi lwabo lwesiGrike seBhayibhile, abo baguquleli bagqiba kwelokuba akuchananga ukuguqulela esi sibhalo ngokuthi “naye ngokwakhe [uLizwi] enguThixo.” Ngoko basiguqulela njani? Nantsi imizekelo embalwa: “ULogos [uLizwi] wayengokobuthixo.” (A New Translation of the Bible) “ULizwi wayenguthixo.” (The New Testament in an Improved Version) “ULizwi wayekunye noThixo yaye enjengaye.” (The Translator’s New Testament) Ngokutsho kwezi nguqulelo, uLizwi akangoThixo. * Kunoko, ngenxa yokuba enesigxina esiphakamileyo kunezinye izidalwa zikaYehova, uLizwi ubizwa ngokuba “nguthixo.” Kule meko igama elithi “thixo” lithetha “umntu onamandla.”
FUMANA IINKCUKACHA EZINGAKUMBI
Inkoliso yabantu ayinalwazi ngesiGrike seBhayibhile. Ngoko ungaqiniseka njani ngentsingiselo yoko kwakuthethwa ngumpostile uYohane? Khawucinge ngalo mzekelo: Masithi utitshala uchazela abafundi ngombandela othile. Emva koko, abafundi babonakala bengayiqondi ngendlela efanayo inkcazelo yakhe. Aba bafundi bangayilungisa njani le meko? Basenokucela utitshala ukuba abanike inkcazelo engakumbi. Ngokuqinisekileyo, ukufunda iinkcukacha ezingakumbi kuya kubanceda bawuqonde ngakumbi loo mbandela. Ngokufanayo, ukuze uyiqonde intsingiselo kaYohane 1:1, unokuhlola incwadi yeVangeli kaYohane ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngesigxina sikaYesu. Ukufunda iinkcukacha ezingakumbi ngalo mbandela kuya kukunceda ukuba ufikelele kwisigqibo esichanileyo.
Ngokomzekelo, khawukhe uhlolisise oko akubhalayo ngokubhekele phaya uYohane kwisahluko 1, indinyana 18: “Akukho namnye umntu owakha wambona uThixo [uSomandla].” Kodwa abantu bambonile uYesu, uNyana, kuba uYohane uthi: “ULizwi [uYesu] ke waba ngumntu, waza wahlala phakathi kwethu. Sabubukela ubungangamsha bakhe.” (Yohane 1:14, IBhayibhile yesiXhosa yowe-1996) Ngoko, ingenzeka njani into yokuba uNyana abe yinxalenye kaThixo uSomandla? Kwakhona uYohane uthi uLizwi “wayekunye noThixo.” Ngoko ingenzeka njani into yokuba umntu abe kunye nomnye umntu aze kwangaxeshanye abe nguloo mntu? Ngaphezu koko, njengoko kubhalwe kuYohane 17:3, uYesu uwuchaza ngokucacileyo umahluko okhoyo phakathi kwakhe noYise wasezulwini. Umbiza uYise ngokuthi “ukuphela koThixo oyinyaniso.” Yaye ngasekupheleni kwale ncwadi yeVangeli, uYohane ushwankathela ngokuthi: “Iye yabhalwa phantsi ukuze nikholwe ukuba uYesu unguye uKristu uNyana kaThixo.” (Yohane 20:31) Phawula ukuba akathi uYesu nguThixo, kodwa uthi nguNyana kaThixo. Le nkcazelo yongezelelekileyo ekwincwadi yeVangeli kaYohane ibonisa indlela afanele aqondwe ngayo uYohane 1:1. UYesu, uLizwi, “nguthixo” ngengqiqo yokuba unesigxina esiphakamileyo, kodwa akalingani noThixo uSomandla.
Khawucinge kwakhona ngalaa mzekelo katitshala nabafundi. Masithi mhlawumbi abanye abafundi basenamathandabuzo, kwanasemva kokuva inkcazelo eyongezelelekileyo katitshala. Yintoni abanokuyenza? Banokufuna inkcazelo engakumbi komnye utitshala. Ukuba inkcazelo yalo titshala wesibini iyafana naleyo yotitshala wokuqala, asenokuphela amathandabuzo abafundi. Ngoko nawe, ukuba akukaqiniseki ngenkcazelo yombhali weBhayibhile uYohane, yokuba uYesu akanguye uThixo uSomandla, unokuhlolisisa inkcazelo yomnye umbhali weBhayibhile. Ngokomzekelo, khawukhe uhlolisise oko kwabhalwa nguMateyu. Ngokuphathelele isiphelo sale nkqubo yezinto, ucaphula amazwi kaYesu athi: “Akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa, azazi neengelosi zamazulu engazi noNyana, kodwa nguBawo kuphela.” (Mateyu 24:36) La mazwi angqina njani ukuba uYesu akanguye uThixo uSomandla?
UYesu uthi uYise wazi ngaphezu koNyana. Kanti, ukuba uYesu ebeyinxalenye kaThixo uSomandla, ebeya kuba nolwazi olulinganayo noYise. Ngoko ke, uNyana noYise abalingani. Kodwa, abanye basenokuthi: ‘UYesu uneendima ezimbini. Apha uthetha njengomntu.’ Kodwa kwanokuba oko bekuyinyaniso, kuthekani ngomoya oyingcwele? Ukuba unguThixo olinganayo noYise, kutheni uYesu engatshongo ukuba unolwazi olulinganayo noYise?
Njengoko uqhubeka nesifundo sakho seBhayibhile, uza kufunda iindinyana ezininzi ngakumbi zeBhayibhile ezithetha ngalo mbandela. Ziza kukuchazela inyaniso ngoYise, uNyana, nomoya oyingcwele.—INdumiso 90:2; IZenzo 7:55; Kolose 1:15.
^ isiqe. 2 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngoYohane 1:1, bona iphepha 24-25 leMboniselo kaNovemba 1, 2008, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
Ngaba ULizwi ‘WayenguThixo’ Okanye ‘Uthixo’?
Yiyiphi indlela echanileyo yokuqonda uYohane 1:1?